देशका ९४ स्थानीय तह अझै विद्युत् सेवा उपलब्ध छैन , के हुन्छ कुलमानको पुर्ननियुक्ति? - NewsCenterNepal.com
देशका ९४ स्थानीय तह अझै विद्युत् सेवा उपलब्ध छैन , के हुन्छ कुलमानको पुर्ननियुक्ति?
२०७७, २८ भाद्र आईतवारमा प्रकाशित
काठमाडौं – देशभरका ९४ स्थानीय तहहरु अझै पनि पूर्ण अन्धकारमा छन् । हाल ११ वटा नगरपालिका र ८३ वटा गाउँपालिकामा विद्युत् प्राधिकरणबाट उपलब्ध हुने कुनै पनि प्रकारको विद्युत् सेवा पुगेको छैन । उज्यालोका हिरो अर्थात नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको सेवा अवधि पनि आज भाद्र २८ गते सकिदैछ ।
घिसिङको नियुक्ति पछि पूर्ण रुपले विद्युतीकरण भएका प्राय सबै स्थान लोडसेडिङ मुक्त भएका थिए । अब उनी बाहिरिने वा पुर्ननियुक्त हुने विषयमा कुनै टुंगो लागेको छैन । यद्यपि देशलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गर्ने अर्को पाटो छँदैछ ।
७ सय ५३ स्थानीय तहहरुमध्ये ९४ स्थानीय तह अझै विद्युत् सेवाबाट पूर्ण रुपमा वञ्चित छन् । ४ सय १४ स्थानीय तहमा भने अहिले पूर्णरुपमा विद्युतीकरण भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार देशभरका बाँकीमध्ये २ सय ३५ स्थानीय तहमा विद्युत् सेवा उपलब्ध छ, त्यो सो क्षेत्रका सबै जनताले उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
देशमा भएका महानगर र उपमहानगरपालिका पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण भएपनि नगरपालिका र गाउँपालिकामा अझै त्यस्तो सेवा पुग्न बाँकी छ । हाल देशभर ७ सय ५३ स्थानीय तहहरु रहेकोमा ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । ६७ नगरपालिका र १६८ गाउँपालिकामा आंशिक रुपमा मात्रै विद्युत् सेवा पुगेको छ । यी तहमा सबै जनताले विद्युत् सेवा उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
यसैबीच भोलि सोमबारबाट प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त हुने भएको छ । प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशक कसलाई बनाउने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले टुंगो लगाउने चर्चा सुरु भएको तीन साता विति पनि अहिलेसम्म नियुक्ति पक्रिया अघि बढेको छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ ले प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको निमित्त मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा समितिले एक जना महाप्रवन्धक र आवश्यकता अनुसार सल्लाहकार र कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नेपाल सरकारले एक जना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ । सोही बमोजिम ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव गर्नेछ र मन्त्रीपरिषद्ले नियुक्ति दिने प्रावधान छ ।
घिसिङको कार्य दक्षता र आम जनतासँग बटुलेका ‘वा वा’ को अवस्थालाई मध्येनजर गर्दा अबको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक घसिङ नै दोहोरिने सम्भावना रहेको देखिएको छ । घिसिङलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोहो¥याउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव तयार पारिसकेको ऊर्जा मन्त्रालय उच्च स्रोतले बताएको छ ।
पछिल्लो समय नेकपाभित्र पनि माओवादी खेमा घिसिङलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा उभिएका छन् भने एमाले खेमा घिसिङको विकल्प खोज्नुपर्नेमा भनिएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने घिसिङको पक्षमा निर्णय गर्ने बताइएको छ ।
घिसिङलाई टक्कर दिनेगरी अहिलेसम्म प्राधिकरण हाक्न को नआएको पनि उच्च स्रोतले बताएको छ । ‘इच्छा राख्ने त धेरै छन्, तर गरिखाने अनुहार भने अझै स्पष्ट नभएका कारण घिसिङले नै दोहोराउने पक्षमा सरकार देखिएको छ ।
२०७२ भदौ २९ गते घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त हुँदा मुलुकमा दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ थियो ।
श्रीमती लिन ससुराली पुगेका ज्वाईको हत्या, ससुरासहित ५ जना पक्राउ